Sina 15 motera mandeha ho azy baolina mandeha motera miova miendrika fitaratra miendrika milina fanamboarana sy mpanamboatra | Zhengxing mekanika
Môtô 20-30 môtô miolakolaka / manalefaka vita amin'ny fanodinana vera sy kristaly
1. Ny fizarana voalohany amin'ny motera 6 (No.1-No.6) dia manamboatra ny sisin'ny ambany fitaratra ary ny sisiny miter eo aloha (0-60 diplaoma), motera 2 (No.7-No.8) ho an'ny seza arris aoriana ary motera 2 ( No.9-No.10) ho an'ny seza aloha. Ny motera No.11.No.12 sy No.13 dia natao ho an'ny fikosoham-baravarankely sy ny poloney farany rehefa motera No.1-No.6 ho an'ny fanodinana volavola manoloana. Ny kodiarana roa farany dia natao ho an'ny famolahana arris aloha sy aoriana. Ny dingana rehetra dia vita amin'ny dia iray.
2. Ity milina ity dia mampiasa SISTEM BEARING CONVEYOR. Mety amin'ny fanodinana vera kely (40mmx40mm) sy fanodinana vera mavesatra (4mx4m) izy io. Ny firafitry ny fononteny ambony dia mety hahatonga ny mpanera mihazakazaka milamina mba hiasa kely 40mm habe amin'ny vera.
3. Ny milina dia manana rafitra fiarovana ny hatevin'ny vera. Rehefa vera matevina diso no apetraka ao anaty masinina. Hijanona ho azy ny masinina. Izy io dia miaro ny bearings amin'ny famotehana.
4. Ny masinina dia mandray ny fifehezana PLC sy ny interface operator (efijery mikasika). Ny masinina dia manana maody miasa 2, maody miasa ary mandeha ho azy mandeha ho azy. Amin'ny maody mandeha ho azy, ny masontsivana glas dia azo ampidirina amin'ny alàlan'ny efijery Touch. Amin'ny maody amin'ny tanana, ny milina dia azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny switch amin'ny tontonana miasa.
5. Fampidinana / tsy famoahana entana mpampita fehikibo fehikibo fotoana. Izy io dia afaka manitsy ny haavony hametrahana fanesorana vera samihafa ..
6. Ny rindrambaiko fanohanana fitaratra dia mampiasa bara fisintahana Aluminium, miaraka amina plastika.
7. Ny fonosana conveyor dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony.
8. Ny bearings bearings dia nohosorana amin'ny alàlan'ny rafitra fanosotra, ny làlan'ny solika natao tsara dia ahafahan'ny tsipika ambony sy ambany mahazo solika mitovy.
9. Ny fivezivezena mpampita aloha dia môtô. Azo ahitsy amin'ny alàlan'ny bokotra elektrika amin'ny tontonana miasa. Aseho eo amin'ny efijery ny hateviny. Misy koa ny famakiana ara-mekanika hanehoana ny hatevin'ny fitaratra.
10. Ny haingam-pandeha dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny inverter matetika.
11. Ny kodiarana farany poloney 3 dia ny kodiarana manazava, izay manome famaranana tena tsara amin'ny fitaratra. Misaraka ny fitoeran-drano.
12. Ny tanky kodiarana ho an'ny zoro miovaova 6 dia mampiasa rafitra mihodina. Ny fantson-drano sy rafitra fiarovana rano marefo eo ambanin'ny mpampita eo anelanelan'ny fitoeran-drano tsirairay dia manome fiarovana tsara ho an'ny masinina feno.
13. Ny zoro dia azo aseho amin'ny efijery.
14. Ny motera dia mampiasa motera avo lenta avo lenta vita amin'ny ABB, izay natao manokana ho an'ny milina beveling.
15. Ny velaran'ny vera voahodina dia tena mamirapiratra sy malamalama, manakaiky ny tampon'ny vera. Ity milina ity koa dia asongadin'ny fanodinana malalaka sy ny fandidiana mora.
Joro fanovana zoro
Volana kodiarana ho an'ny mitre
Max. sakan'ny mitre:
Min. fitaratra habe:
Previous: Motera 11 mandeha ho azy baolina mandeha maotera miova miova fitaratra fitaratra milina
Manaraka: milina fantsom-pifandraisana mandeha ho azy miovaova amin'ny masinina manify
mandeha ho azy rafitra rafitra rojo zoro fitaratra e ...